Igwe na-ahụ maka okporo ụzọ Solar SD-RS-SG3 dị elu Wistron
Ịnye ọkụ: Ogwe anyanwụ (monocrystalline 5V/90mA) (1.2V/1300mAh)
Batrị: batrị ithium 3.2V/1000mah (1.2V/1500mAh)
Mmiri àmà: IP68
Solar Road Stud makwaara dị ka anya nwamba, nwere ike inye aka belata ihe ọghọm na ụzọ ụgbọ okporo ígwè mpaghara, njikọta ma nye ndị ọkwọ ụgbọ ala n'ọchịchịrị na ihu igwe ihe ọjọọ na ịdọ aka ná ntị n'ihe ize ndụ. Usoro mbara igwe nke ọkụ ihe nrịbama nke anyanwụ na -akwado maka ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi yana ịchekwa ego. N'ime ihe karịrị afọ iri na ise nke ahụmịhe ụlọ ọrụ, ndị na -atụgharị ụzọ okporo ụzọ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ọnụ ahịa asọmpi ma na -enye ahịa ahịa nchekwa okporo ụzọ zuru ụwa ọnụ na ndị mmekọ ntụkwasị obi n'ụwa niile.
Ntọala ọkụ ọkụ nrịgo anyanwụ a bụ nke aluminom nkedo, na elu ya bụ teknụzụ na -efesa plastik.
Ejiri ihe PC emebere shei ahụ, nke nwere oke mmetụta na nkwụsi ike ọkụ.
Ibu ikike karịrị tọn 40, enwere ike iji ya n'etiti okporo ụzọ.
Aha ngwaahịa Wistron SD-RS-SG3 anyanwụ okporo ụzọ stud
Isi ihe Oké ọrụ nkedo Aluminium
Ịnye ọkụ Ogwe anyanwụ (monocrystalline 5V/90mA) (1.2V/1300mAh)
Batrị Batrị lithium 3.2V/1000mah (1.2V/1500mAh）)
Ikanam 3pcs/n'akụkụ φ10mm super light LED
Nlereanya na -egbu maramara na -egbu maramara ma ọ bụ na -aga n'ihu
Mmiri àmà IP68
Ogologo ndụ Afọ 3 maka batrị lithium
Nguzogide > 20tons (static)
Oge ọrụ Oge 200 maka ụdịdị na -egbu maramara, 100hrs maka ụdịdị kwụ ọtọ
Ngwugwu 1pcs/igbe; 32pcs/Ctn; arọ: 26.1Kg; Ogo katọn: 54*28*26cm
Ụkpụrụ ọrụ nke Solar Road Stud Light
N'ehihie, ogwe ọkụ anyanwụ na -enweta ìhè anyanwụ ma gbanwee ike anyanwụ ka ọ bụrụ ike eletrik, nke echekwara na ngwaọrụ nchekwa ike (batrị ma ọ bụ capacitors). N'abalị, a na -agbanwe ike eletriki na ngwaọrụ nchekwa ike ka ọ bụrụ ike ọkụ (ndị na -ejikọ ya na fotoelectric) ma na -esite na ọkụ ọkụ. Ìhè na -enwupụta na -akọwapụta ụzọ ma na -adọta ọkwọ ụgbọ ala. Oghere okporo ụzọ anyanwụ ga -amalite na -akpaghị aka na -enwu ọkụ mgbe abalị dara ma ọ bụ na ihu igwe adịghị mma .Ọkụ na -enwu enwu na -arụ ọrụ nke ọma n'ịdọrọ uche ndị ọkwọ ụgbọ ala karịa oge okporo ụzọ a na -emebu.
Usoro nrụnye nke agbakwunyere Solar Road Stud
1. Jiri nlezianya kanye akara n'etiti oghere nke ọkụ ọkụ okporo ụzọ okporo ụzọ nke anyanwụ.
2. Wepu irighiri ihe niile site na oghere nrụnye.
3. Wụnye epoxy n'ime oghere n'otu ntuziaka onye nrụpụta.
4. Eziokwu na oghere nrụnye kwụ ọtọ.Verity na oghere nrụnye buru oke ibu iji kwe ka epoxy gbaa okirikiri okporo ụzọ okporo ụzọ anyanwụ.
5. Debe elu ọkụ nke stud okporo ụzọ anyanwụ na nkuku nlele chọrọ. Chọpụta na epoxy na -esochi oghere nrụnye na ogwe akara nke anyanwụ.
6. Mgbe ị gwọchara ọnya okporo ụzọ anyanwụ nke LED maka awa 6-8, wepu nrụnye nke ụlọ kewapụrụ iche.
Nke gara aga: Anyanwụ okporo ụzọ SD-RS-SP1
Osote: Anyanwụ okporo ụzọ SD-RS-SA5
Anyanwụ okporo ụzọ SD-RS-SP2
Anyanwụ okporo ụzọ okporo ụzọ SD-RS-SG2